निर्मला पन्तको घरमा मन्त्री बिना पुग्दा रुवावासी, भक्कनिदै कसले के-के भने ? — Sanchar Kendra
निर्मला पन्तको घरमा मन्त्री बिना पुग्दा रुवावासी, भक्कनिदै कसले के-के भने ?
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कंचनपुरकी १ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तका परिवारलाई भेटेकी छिन ।
बिहान ११ बजे, खानेपानी मन्त्री तथा कन्चनपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र.१ बाट निर्वाचित सांसद बीना मगरसहितको टोली मृतक निर्मला पन्तको घर पुग्दा घर सुनसान थियो ।
निर्मलाकी आमा भावशून्य । ‘मृत्युको पीडा के हुन्छ त्यो मैले नि भोगेकी छु’ मन्त्री मगरले भावुक हुँदै भन्न के भ्याएकी थिइन, छेउमा बसेकी कान्छीआमाको बाध भत्कियो । उनले सम्हाल्न सकिनन् ।
मन्त्री मगर केही बोल्न सकिनन्, उठेर कान्छी आमा छेउ गएर सम्हाल्न खोजिन् । तर, सान्त्वना दिन गएकी मन्त्री कान्छी आमालार्इ अङालो मारेर अाफै रुन पुगिन् । यता निर्मलाकी आमाको आँखामा अश्रु भेल बगिरहेको थियो ।